Asehon’ny Zo Hahazo Vaovao ao Sri Lanka ny Lalam-Panakanana Tranonkala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2018 7:51 GMT
Pikantsarin'ny tranokalan'ny Zo Hahazo Vaovao ao Sri Lanka.
Lahatsoratr'i Raisa Wickrematunge nivoaka voalohany tao amin'ny Groundwiews, tranonkala iray an'ny olom-pirenena mpampita vaovao nahazo mari-pankasitrahana tao Sri Lanka ity. Ny endrika nasiam-panovana etsy ambany dia anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoatiny iarahana amin'ny Global Voices.
Nanomboka niely tamin'ny 8 novambra fa nosakanan'ny mpanome tolotra aterineto rehetra (FAI=ISP) ao Sri Lanka ilay LankaeNews tranonkala fampahalalam-baovao iray tsy miankina. Mifanaraka amin'izany, nisy tranonkala antserasera vitsy nanao fangatahana fampahalalam-baovao (RTI) avy amin'ny Lalànan'ny Zo Hahazo Vaovao ao Sri Lanka mba hahazo andinindininy bebe kokoa ary nipongatra avy ao ny antsipirihany manohina momba ny fizotran'ny fanakanana tranonkalam-baovao.
Nandritra ny taona maro, niteraka adihevitra ny LankaNews. Tamin'ny taona 2016,nisy mpisolovava iray nanoratra fiampangana miisa 14 teo anivon'ny fitsarana hamelezana ny mpamoaka lahatsoratra. Mampitamberina ny taona 2010 nanakatona io tranokala io talohan'ny famoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena izao fanakatonana izao, ary mbola nakatona ihany koa tamin'ny taona 2011,miaraka amin'ireo hafa toy ny Groundviews sy ny Transparency International. Tamin'izany fotoana izany nandà fanakatonana ireo tranonkala ireo ny Vaomiera Mpandamina ny Fifandraisan-davitra (TRC) ao Sri Lanka.
Fangatahana fanazavana amin'ny fomba ofisialy nataon'ireo tranonkalam-baovao tsy miankina ao Sri Lanka
Rehefa fantatra amin'ny fanakatonana tranonkala nanakiana ny politikany ny governemantan'i Mahinda Rajapaksa, filoham-pirenena teo aloha, dia lasa miteraka ahiahy izany satria efa manana governemanta vaovao i Sri Lanka nanomboka tamin'ny taona 2015. Ny Groundviews sy ireo tranonkala namany Vikalpa sy Maatram dia nametraka fangatahana araka ny lalàna RTI mba hahazoana fanazavana misimisy kokoa mikasika ny dingana Fanakatonana.
Nanao ireto fangatahana ireto tamin'ny komitin'ny fifandraisan-davitra (TRC) ao Sri Lnka tamin'ny 10 Novambra ny Groundviews :
Fitarainana fanenjehana ireo tranokalam-baovao voarain'ny vaomieran'ny fifandraisandavitra nanomboka taona 2015 ka hatramin'izao, ary nangataka ny mombamomba ireo mana-pahefana izay nanao fangatahana.
Ny tranonkala rehetra nosakanan'ireo mpanome tolotra aterineto (ISP) ao Sri Lanka vokatry ny fitarainana nanomboka tamin'ny taona 2015, sy ny antony nanakatonana azy.
Ny fitarainana rehetra mikasika ny tranokalam-baovao Lankaenews nandritra ny taona 2017 sy ny mombamomba ireo manam-pahefana eo amin'ny fitondrana nanao ny fitarainana.
Ny baiko rehetra nanakatonana ny Lankaenews tamin'ny Novambra 2017, sy ny mombamomba ireo manam-pahefana nanome baiko sy ny antony nanomezany izany baiko izany.
Ny fandraketana mahatafiditra ny vaomieran'ny fifandraisandavitra tamin'ny fanakanana ny Lankaenews.
Nanao fangatahana toy izany ny Maatram, tranonkala iray mitovy amin'i Groundviews fa amin'ny teny tamola, tamin'ny 13 Novambra, telo andro taty aoriana, ary niatrika olana maromaro. Nangataka tamin'ny Maatram ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra mba hametraka ny fangatahan'izy ireo amin'ny teny anglisy na teny sinhaliana ary miaiky fa haka olona ivelany amin'ny fandikana ilay fangatahana; noho ny tsy fananan'izy ireo fitaovana hanatanterahana izany. Nilaza ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra fa io no fangatahana RTI voalohany voarain'izy ireo tamin'ny teny tamola, izay iray amin'ireo teny ofisialy ao Sri Lanka ankilan'ny teny sinhaley.
Nangataka fampiharana zo RTI tamin'ny vaomieran'ny fifandraisandavitra ihany koa ny Vakalpa, tranonkala namana iray mamoaka ny votoatiny amin'ny teny sinhaley. Nolavina noho ny fiarovam-pirenena ny fangatahan'ny Vikalpa sy ny Maatram na izany aza. Somary hafahafa ihany izany noho ny fiarovan'i Hemantha Warnakulasuriya, mpanolotsainan'ny filoha, ny fanakanana tao amin'ny fahitalavi-pirenena.amin'ny maha mpikambana azy ao amin'ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra, araka ny navoakan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny gazety an-tserasera The Island.
Namoaka ny lisitr'ireo tranonkala sy lahatsoratra nosakanana ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra
Namaly ny Groundviews ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra tamin'ny 28 Novambra, nanamarika fa “tsy eo am-pelatananan'izy ireo na voafehin-dry zareo” ny fangatahana voalohany. Ny fangatahana fahatelo sy fahaefatra ary ny fahadimy dia nolavina ihany koa mba hitandroana ny fiarovam-pirenena.
Na dia izany ary dia navoakan'izy ireo ny lisitry ny tranokala nosakanan'ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra (fangatahana faharoa). Nangataka ny antsipirihany amin'ireo tranonkala nosakanana tao amin'ny mpanome tolotra aterineto ihany koa ny Maatram fa tsy nahazo izany ry zareo.
Nanambara ny vaovao navoakan'ny vaomieran'ny fifandraisandavitra fa tranonkala 13 no nosakanana hatramin'ny taona 2015. Tao anatin'izany ny vaovao ara-politika sy ny sary vetaveta.
Lisitry ny tranonkala nakatona araka ny Vaomiera misahana ny fifandraisan-davitra ao Sri Lanka. Sary avy amin'ny Groundviews.
Ny antontan-taratasy fanohanana dia nampiseho ny dingana ao ambadiky ny fanakatonana ny tranonkala tsirairay voalaza ao amin'ny taratasy.
Na ny minisitry ny haino aman-jery aza no nanome baiko farany ny vaomieran'ny fifandraisan-davitra dia avy any amin'ny sekretariam-panjakana ny baiko voalohany farafahakeliny ho an'ny efatra amin'ireo tranonkala.
Taratasy avy amin'ny sekretariam-panjakana.Sary avy amin'ny Groundviews.
Nanamarika ity taratasy nosoniavin'ny sekreteram-panjakana PB Abeykoon ity fa nanintona ny fifantohan'ny filoha ireo tranonkala voatanisa ireo. Asehon'ny URL sasany mazava fa mifandrohy amin'ny lahatsoratra manokana izy ireny fa tsy amin'ny tranonkala iray manontolo.
Taorian'izany dingana izany, nanoratra taratasy izay nosoniavin'i Nimal Bopage Sekreteran'ny Minisitera ho an'ny Vaomiera Mpandamina ny Fifandraisan-davitra ny Minisiteran'ny Fanavaozana ny Parlemantera sy ny Haino Aman-Jery.
Ny Vaomiera Mpandamina ny Fifandraisan-davitra ho setrin'izany nandefa taratasy tany amin'ireo mpanome tolotra aterineto rehetra.
Namoaka ireto antony ireto ny Vaomiera Mpandamina ny Fifandraisan-davitra tamin'ny nanakanana ny tranonkala efatra: “namoaka vaovao tsy marina sy nanimba ny lazan'ny filoham-pirenena” ny vigasapuwath.blogspot.com, ny ukussa.org, ny lankanewsweb.today, ary ny lankacnews. Ny roa hafa lankanewsweb.today sy ny sinhala.lnwtoday ihany koa dia nakatona noho ny “famoahana vaovao diso”
Sary avy amin'ny Groundviews
Ilay tranokala newjaffna.net indray dia nosakanana fa nanao fanakianana fanalam-baraka mpitsara tao Jaffina. Ny roa amin'ireo tranonkala nisy nanamarika namoaka votoaty mamoha fady, ary nosakanana taorian'ny fanadihadiana nataon'ny Sampana Misahana ny Heloka An-Tserasera.
Tsy manana lalàna mifehy ny fidirana aterineto i Sri Lanka
Tsy manana lalana feno mamehy ny fidirana aterineto, ary tsy nanao azy ho fitaovana ahafahana maneho hevitra malalaka (na dia misy lalàna maro aza momba ny heloka ara-informatika, ny lalàna mifehy ny fifandraisan-davitra ao Sri Lanka, ny Lalàna momba ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana ary ny Lalàna mifehy ny elektronika izay miresaka olana isan-karazany amin'ny fampiasana ny aterineto.)
Efa nisy ny andrana maro hanaraha-maso na hanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera ao Sri Lanka – avy amin'ny departemantan'ny fampahalalam-baovao manery ny tranonkalam-baovao mba hisoratra anarana tamin'ny taona 2011, sy vao haingana indray tamin'ny taona 2016 – ary nanaiky ny minisiteran'ny Fampitam-baovao sy ny Fampahafantarana fa nanakatona tranonkala enina izy ireo noho ny antony “karazam-pamonoana” sy “fanitsakitsahana ny fiainana manokana”.
Mampisalasala ihany koa ny maha ara-dalana ny fanakanan'ny Vaomiera Mpandamina ny Fifandraisan-davitra tranonkala raha jerena araka ny andininy faha 53 ao amin'ny lalàna mifehy ny fifandraisandavitra ao Sri Lanka, taona 1991. Nisioka i Gehan Gunatilleke, Mpianatra mpila ravinahitra sady mpisolovava:
Araka ny famakiko ny lalàna mifehy ny fifandraisan-davitra dia tsy manana fahefana hanakana ny fampitana raha tsy manana didy avy any amin'ny fitsarana na mahazo baiko avy amin'ny minisitra ny Vaomiera Misahana ny Fifandraisandavitra. Fa manahy aho amin'ny lanjan'ny fangatahana (zo) fampahalalaham-baovao iray. Tsaratsara kokoa raha didy (no atao).
Mazava ny lalan'ny taratasy ary mitondra mankany amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny governemanta. Mahatsapa ireo mpikatroka ao Sri Lanka tokony melohina ho toy ny sakana amin'ny fahalalahan'ny haino aman-jery sy ny fahalalahana miteny io fanao io.